उड्न लागेको एउटा जहाजका पाइलटबीच कुटाकुट, एयरपोर्टमै भयो यस्तो हंगामा! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > उड्न लागेको एउटा जहाजका पाइलटबीच कुटाकुट, एयरपोर्टमै भयो यस्तो हंगामा!
admin January 20, 2019 अन्तराष्ट्रिय 0
भारतको लखनउस्थित अमौसी एयरपोर्टमा बैंगलोरका लागि उड्न लागेको एउटा जहाजका पाइलटबीच कुटाकुट भएको छ । जहाज उड्नु भन्दा केही अघि एयर इन्डिगोको विमान (६-ई२२६) का दुई पाइलटबीच जहाजमै कुटाकुट भएको हो ।
पाइलटबीचको कुटाकुटले जहाज ढिलो हुँदा यात्रुले एयरपोर्टमै हंगामा गरे।त्यसपछि एयरलाइन्स प्रशासनलले पुणेबाट कोलकाता जाने विमान ६ई-५२३ का पाइलटलाई बोलाएर यस जहाजलाई साढे चार घण्टापछि साँझ ६.४९ बजे बैंगलोर पठाए । इन्डिगो एयरलाइन्सको विमानलाई चौधरी चरण सिंह अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्टबाट दिउँसो २ बजेर २० मिनेटमा लखनउबाट उडान भरेर अपरान्ह ४.३५ बजे बैंगलोर जानुपर्ने थियो । शनिवार जब यात्री एयरपोर्टको धावनमार्ग पुगे तब विमान ढिलो उड्ने थाहा पाए ।
एयरपोर्ट सूत्रले भने पाइलटबीच झगडा नभएको दाबी गरेको छ ।पाइलटको ड्यूटी पूरी भएकाले उनीहरुले जहाज उडाउन नमानेको दाबी एयरपोर्ट प्रशासनले गरेको छ । यात्रुका अनुसार पाइलट कुटाकुट गर्न थालेपछि इन्डिगो एयरको हेल्पलाइनमा फोन गर्दा कर्मचारीले कुरा सुन्दै नसुनी फोन होल्डमा राखिदिएका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा
नेपाली मृगाैला पीडितहरूका लागि आयो यस्तो खुशीकाे खबर
लियोनेल मेस्सीले आँसु पु’छेको ‘टि’स्यू पेपर’को मूल्य १० लाख डलर !
सुन्दै अचम्म लाग्ने यस्तो फार्म, जहाँ युवतीहरूबाट बच्चा जन्माईन्छ!